म नचिप्लिएको भए नेपालको नतिजा अर्कै हुन सक्थ्यो: उपकप्तान भरत खवास | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
म नचिप्लिएको भए नेपालको नतिजा अर्कै हुन सक्थ्यो: उपकप्तान भरत खवास
भदौ २८, २०७५ बिहिबार १९:४८:१२ | उज्यालो सहकर्मी
दक्षिण एशियाली फुटबल च्याम्पियनसिपको नामबाट दुई संस्करण र त्यसपछि साफ च्याम्पियनसिपको नामबाट १० संस्करणसम्म आइपुग्दा नेपाल अहिलेसम्म फाइनलमा पुग्न सकेको छैन ।
छुट्टा छुट्टै खेलमा नेपालले दक्षिण एशियाका प्रतिस्पर्धीमध्ये हराउन बाँकी कुनै टिम छैन । तर, एउटै प्रतियोगितामा नेपालले यो उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।
बंगलादेशको ढाकामा यसपटक पनि नेपालको त्यही नियति दोहोरियो । साफ इतिहासमा चौथो पटक सेमिफाइनलमा पुगेको नेपाली माल्दिभ्ससँग पाराजित हुँदै बाहिरियो ।
बिहीबार मध्याह्न स्वदेश फर्किएपछि नेपाली टोलीका उपकप्तान तथा नेपालले खेलेका चारमध्ये दुई खेलमा कप्तानको जिम्मेबारी सम्हालेका अनुभवी स्ट्राइकर भरत खवाससँग यसपटकको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले पराजित हुनुको कारण र अनुभवबारे यसो भन्छन्,-सुरुको खेलमा पाकिस्तानसँग हारे पनि हामीले त्यसपछिका दुई खेलमा शानदार खेलेका थियौं । दोस्रो खेलमा सब्स्टिच्युटको रुपमा छिरेर पनि मैले गोल गर्न सकेँ ।
समूहका दुई खेलमा हामी लयमा फर्किसकेका थियौं । भुटानलाई हराएपछि घरेलु टोली बंगलादेशविरुद्धको खेल हाम्रा लागि गर या मरको आवस्थामा थियो । हामीले आफ्नो रणनीति अनुसार खेल्यौं । ‘सेट पिस’ (फ्रिकिक, कर्नर)मा हाम्रो गोल निस्किएको थियो । हामी उत्साहित थियौं ।
माल्दिभ्सविरुद्धको खेलमा पनि हामीले त्यही रणनीति लिएका थियौं । पहिलो कुरा खेलमा हारेपछि धेरै कुराहरु आउँछ । हामी धेरै आत्मविश्वासी पनि भयौं कि जस्तो लाग्छ । घरेलु टोलीलाई हराएपछि हामी धेरै उत्साहित थियौं । अर्को समूहबाट माल्दिभ्सले राम्रो खेलिरहेको थिएन ।
माल्दिभ्सविरुद्धको खेलमा नेपालको कप्तानी मैले नै गरेको थिएँ । खेलअघि म र प्रशिक्षकलाई म्याच अफिसियलले बोलाएर पहिलो हाफको २५ देखि ३० र दोस्रो हाफको ६५ देखि ७० मिनेटभित्र कुलिङ ब्रेक हुने जानकारी दिएका थिए ।
तर, हामीले मैदानमा प्राक्टिस गर्दै गर्दा एक्कासी कालो बादलसहित आकाश मडारिएर आयो । खेल सुरु हुँदा नहुँदै पानी पर्न थाल्यो । खेल सुरु भएसँगै हामीलाई अप्ठेरो भएको थियो । हिलो मैदानमा नखेलेको लामो समय भइसकेको थियो । हामीले आर्टिफिसियल टर्फमा अभ्यास गरेका थियौं । भूकम्पपछि दशरथ रंगशालामा खेलेका छैनौं । हिलाम्य मैदानले दुवै टोलीलाई असर गरेको हो तर, हामी बढी लडिरहेका थियौं ।
खेलमा मैले पनि एउटा राम्रो चान्स पाएको थिएँ । तर, गोल गर्न सकिन । त्यसबेला म नचिप्लिएको भए नेपालको नतिजा अर्कै हुन सक्थ्यो । म मात्र होइन बिमल, सुनील सबैलाई गाह्रो भएको थियो । अन्तिममा हामीले गोल खानु परेको पनि त्यस्तै कारणले हो ।
मेरो विचारमा साफको फाइनलमा पुग्दै उपाधि जित्ने हाम्रा लागि सुनौलो अवसर थियो । माल्दिभ्सको लय त्यति राम्रो नदेखिनु र भारतले यू–२३ टिम पठाउनु हाम्रा लागि शुभसंकेत थियो । भारत र माल्दिभ्स हामीले हराउनै नसक्ने टिम पनि थिएन । तर, निर्णायक खेलमा हामीले लय गुमाउन पुग्यौं । माल्दिभ्सविरुद्ध सुरुमै गोल खाएपछि केहि प्रेसर भयो । बीचमा खेल रोकिएर पुनः सुरु भएपछि पनि पोजिसन हाम्रै बढी थियो । तर, तालमेल मिल्न सकेन र गोल गर्न सकेनौं ।
हारिसकेपछि सबै सकियो भन्ने भन्दा पनि हारबाट पाठ सिकेर भविष्यका प्रतियोगितामा राम्रो गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपाली टोली क्षमतावान छ ।
अन्तिम अपडेट: फागुन २९, २०७५
Shusil Raj Shahi
Sept. 13, 2018, 10:53 p.m.
टुटेको बन्दुक लिएर भोकै लडाई गर्न जाउ भने जस्तै भएको छ नेपाली खेलाडीहरुको अवस्था /न त राम्रो प्रशिक्षण, न राज्यको लगानी ? अनुदानमा आएका खेल सामग्रीका भरमा कति नै उपलब्धिको आशा गर्न सकिन्छ र ? नेपाल साफको सेमीफाइनलसम्म पुग्नु पनि ठूलो कुरा हो / बधाई छ नेपाली खेलाडीलाई /
Sept. 13, 2018, 8:28 p.m.
कस्तो अचम्को फ़ुटबॉल मैदान नेपाली खेलाडीमात्र चिप्लीने
दीपिका पादुकोणले रणबिर कपूरलाई भेट्दा फ्यानले भने : रणवीर स...
चलचित्र यात्रा 'अ म्युजिकल भ्लग'काे हाेली प्रि-सेलिब्रेशन
शिखर नगरपालिकामा डिजिटल सूचना पार्टी
रेडियो अडियो र दालभात तरकारीले संयुक्त होली विशेष कार्यक्रम ...
हिमालयन शेर्पालाई हराउँदै दाउफिन्स बन्यो माई भ्याली गोल्डकपको ...
आईपीएल र विवाद एक अर्काका पर्याय
विप्लवलाई कांग्रेसको आग्रह : हत्या, हिंसा र चन्दा आतंक छोडेर ...
धनकुटाका लोकेन्द्र राईले अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा स्वर्...
पार्टीको सांगठनिक एकीकरणको काम बिनाकारण लम्ब्याइयाे : माधवकु...
जिल्ला अदालत दाङले सुरु गर्‍याे भिडियो कन्फ्रेन्सबाट न्यायिक सेवा
थकाली समुदायको ‘तोरन्ल पर्व’ - फागु पूर्णिमा सुरु (फोटाेफिचर)
२०२३ मा हुने फिफा महिला विश्वकपकाे आयाेजनाका लागि ९ देशकाे...